I-Clover Hill Studio-Kufuphi neDunedin kunye neCatlins - I-Airbnb
I-Clover Hill Studio-Kufuphi neDunedin kunye neCatlins
Wamkelekile kwiYunithi yeSitudiyo saseClover Hill. IMilton yidolophu encinci yasemaphandleni enemizuzu engama-40 eMazantsi eSixeko saseDunedin, imizuzu eli-15 ukuya kwisikhululo seenqwelomoya saseDunedin, imizuzu eli-12 ukuya kwiilwandle ezininzi kunye nesango eliya: kuMbindi weOtago, iCatlins kunye neNdlela eMazantsi eScenic. Ifakwe kwibhloko ethuleyo ye-5 acre yokuphila. Yondla iigusha ezifuywayo, patha izinja ezisebenzayo kwaye udibane noChocky noRosie iikati zethu ezinobubele.
Ifanelekile kubahambi beshishini, izibini, abantu abathandanayo bebodwa.Istudiyo esiziqulathe ngokupheleleyo, esikhutshiweyo kwindlu enkulu, kunye nembonakalo yeGadi.
I-Intanethi: I-WiFi yasimahla kunye ne-32" ye-Smart TV nazo zonke ii-apps zakho zokusasaza ozithandayo.
Ikhitshi: Ikhitshi lixhotyiswe ngethowusta, ijagi, imicrowave, ifriji, iti, ikofu, iswekile, i-cutlery kunye nezitya.
Kukho iiCafes ezininzi, uKhetho lokuFaka ngokukhawuleza, kunye neTavern yendawo ekufutshane. Sibuze iingcebiso :)
Igumbi lokuhlambela kunye nempahla yokuhlamba: Ibandakanya ishawari ezimeleyo, indlu yangasese, irack yetawuli, isitya kunye neendawo zokuhlambela iimpahla ezibandakanya kunye nomatshini wokuhlamba impahla, irack yempahla, i-ayini kunye nebhodi yoku-ayina. Sikunika iitawuli ezintle ezintle, isixhobo sokomisa iinwele, ishampoo / isepha yomzimba kunye nephepha langasese.
Ifenitshala yeSitudiyo: Ibhedi yeKumkanikazi etofotofo kakhulu enelinen esemgangathweni kunye nebhedi, idesika, izitulo ezi-2 zokufunda, ukuphumla okanye ukubukela iTV. Kukwakho netafile yangaphandle kunye nezitulo ukuze ukonwabele umbono wegadi ngelixa uphunga iwayini ngeengokuhlwa ezishushu.
Ukufudumeza / Ukupholisa: istudiyo sinempompo entle kakhulu yobushushu eya kukugcina ushushu ngeentsuku ezipholileyo kwaye ikupholise kwezo zishushu!
Ukufikelela kwiiNdwendwe/UkuPaka: Indawo yokupaka iyafumaneka kwisiza.
Indawo ezolileyo, igumbi likude kakhulu nendlela kwaye lizolile kakhulu.